Ukubonakala kwe-China Mini kunye noMgama omde u-656ft. Inkqubo yokuhanjiswa kwevidiyo engenazingcingo kunye nabenzi | Iqela leBrocade
Inkqubo yokuhambisa ividiyo ngaphandle kwe-WTS200 yinkqubo yevidiyo ye-HDMI engenazingcingo enokuxhasa i-4K (3840 * 2160P) @ 30Hz. I-WTS200 inoluhlu lweenyawo ezingama-656 zoluhlu lokubona ngogqithiso olunokufezekisa ngaphantsi kwe-100ms latency. Ixhasa ibhetri, iBhanki yamandla, iadaptha yokutshaja. Ibhetri etshajiweyo eyi-660mAh inamandla okwamkela okanye ukuhambisa ngokuqhubekayo ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-4.
Umthumeli we-WTS200 unamazibuko amabini e-HDMI, igalelo elinye le-HDMI kunye ne-HDMI loop ngaphandle kwemiqondiso yeaudiyo nevidiyo. Nangona kunjalo, umamkeli weWTS200 unamazibuko ama-HDMI anokuvelisa zombini iaudiyo kunye nevidiyo kubekekilitha ezimbini ngexesha elinye. Uyilo lwee-eriyali ezimbini luphucula kakhulu umgangatho kunye nokuzinza kwekhonkco elingenazingcingo. Uyilo lwezinto ezincinci kunye nefashoni zetsimbi ezivumela i-WTS200 ukuba ithwale ngokulula kwaye isetyenziswe kwiimeko ezininzi. Njengokudubula kwemeko yangaphandle, usasazo lomtshato bukhoma, iankile yenethiwekhi njl.
Kwinkqubo yemiboniso bhanyabhanya kunye nomabonakude, iintambo zemveli bezisoloko ziyingxaki enkulu ekuphazamiseni imveliso, enjengomgama phakathi kwekhamera kunye nendawo yokubonisa inde, i-wiring ayilunganga, abantu bayanyathela, imeko yendawo inzima , iingozi ze-wiring zihlala zithande ukwenzeka, ezinokuchaphazela ukufotwa okuthe tye kwemiboniso bhanyabhanya kunye nomabonakude. Ngokukodwa kwezinye iimeko zosasazo ngqo, iingozi zosasazo ngqo zinokubangelwa. Inkqubo yokuhambisa ividiyo engenazingcingo yeWTS200 inokuzithintela ezi ngxaki kakuhle. Inkqubo ye-
ukusetyenziswa kwezixhobo zokuhambisa umfanekiso ngaphandle kwamacingo kwi-Ultra-high-iinkcazo zokuhanjiswa kwevidiyo kudutyulo lwemihla ngemihla kuye kwaba yinto, kwaye ukusetyenziswa kwayo kwifilimu nakwisangqa sikamabonwakude kuya kusanda. Okwangoku, i-WTS200 inamandla okungena eludongeni kwaye ithumela inkcazo ephezulu ye-4K @ 30Hz isignali ye-HDMI kwisuphavayiza ene-latency ephantsi.
Uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi loop kwi samaza
Inkxaso yolawulo lokubonisa lwe-OLED kunye nomsebenzi ophambili
Uyilo lwee-eriyali ezimbini lufumana ividiyo ecekeceke kwaye izinzile
RJ45 amazibuko ilungele ukufakwa kwekhamera ye-IP kunye nekhompyuter ye-RTSP yokumisela nokudlala kwakhona
Umthombo ngongeniso lwe-HDMI
Isidlulisi se-HDMI X 1pc
Umamkeli we-2.HDMI X 1pc
Uhlobo lwe-C seAdapter X 2pcs
4.5G Ibhendi ye-Antenna X 4pcs
Incwadana yomsebenzisi 5 X 1pc
Egqithileyo I-Ultra Long-Range Wireless 4K i-HDMI Isidlulisi sokuhambisa kunye neReceiver Kit ukuya kuthi ga kwi-656ft
Okulandelayo: Uluhlu olude 2624ft. Inkqubo yokuThunyelwa kweVidiyo engenazingcingo
ICPU I-ARM A7 (isiseko esiphambili se-1.3G); IDRAM 4Gb x 2; I-SPI ROM 32Mb
Rhoqo 5.1 ~ 5.8GHz
Ububanzi bebhendi engenazingcingo 20MHz
Imijelo ekhoyo 22
Ukuhambisa amandla 22dBm / MCS7
Ukufumana uvakalelo -74dBm / MCS7
Ijenali yejenali 4T4R MIMO
Ukufumana i-eriyali 5dBi yangaphandle 0 ° -20 °
Ujongano lwe-antenna SMAx4 20 ° -180 °
Ukuhambisa umgama I-200m
Ungeniso lwe-HDMI Inkxaso yesigqibo (4K30 / 24Hz, 1080P60 / 50/30/25 / 24HZ, 1080I60 / 50HZ, 720P60 / 50HZ）
Igalelo le-3G-SDI Inkxaso yesisombululo (1080P60 / 50/30/25 / 24HZ, 1080I60 / 50HZ, 720P60 / 50HZ, njl.)
Igalelo le-RJ45 Ilungele iikhamera ze-IP
Imowudi yokufaka iikhowudi H.264 / H.265
Iziphumo ze-HDMI Inkxaso yesigqibo (4K30 / 24HZ, 1080P60 / 50/30/25 / 24HZ, 1080I60 / 50HZ, 720P60 / 50H, njl.)
Iziphumo ze3G-SDI Inkxaso yesisombululo (1080P60 / 50/30/25 / 24HZ, 1080I60 / 50HZ, 720P60 / 50HZ, njl.)
Iziphumo zeRJ45 Ilungele ikhowudi ye-RTSP yokwenza ikhowudi kunye nokudlala kwakhona
Imowudi yokuCacisa H.264 / H.265
Inqanaba lesampulu yeaudio I-PCM 48K16Bit
Incwadana yomsebenzisi WTS200
Incwadana yomsebenzisi WTS200 (isitshayina)
Inkqubo yokuThunyelwa kweVidiyo engenazingcingo ye4k
Inkqubo yokuhanjiswa kwevidiyo engenazingcingo ye5g
Inkqubo yokuThunyelwa kweVidiyo engenazingcingo
Inkqubo yeTransmission yeVidiyo engenazingcingo yeFilimu